1. Maalmahan, oo leh qaab weji ah Ama wajiga V-chef Taasi si kasta oo aad u eegto, waxay u egtahay isbeddel xilligan Qaado sawirro qurux badan sida Pangpuri Sida xiddig sare Waa riyada dhalinyarada Dad badan ayaa la kulma dhibaatada wajiyada bararsan. Sidoo kale loo yaqaan "weji weyn" oo walaac ku abuuray Ama dadka qaar ayaa lagu kaftamaa inay kalsoonida kala noqdaan sawir qaadista ama nolosha Maanta waxaan haynaa talooyin waa weyn oo kaa caawinaya inaad hesho muuqaal qurux badan oo wajiga ah iyo sida lumiyo miisaanka wajiga oo xaqiijinaya in qof walba uu sameyn karo dhib la’aan
2. Samee jimicsi muruqyada wajiga si joogto ah, jimicsi fudud oo sameyn kara inta lagu jiro maalinta. Ama ka hor intaadan seexan inta lagu jiro xilliyada nasashada loo baahan yahay Muhiim ayey u tahay hab lumiyo miisaanka wajiga. Adiga ayaa sameyn kara kaligaa. Waxaa jira talaabooyin fudud:
3. Ku billow adiga oo calaacalaha si tartiib ah u dhigaya labada macbud. Kadib ilkaha si adag u xir si daanka u kacsan yahay. Riix calaacasha gacantaada si aad ugu wareejiso macbudka si wareegsan 3 si fudud oo raaxo leh si aad u dareento muruqyada oo isdajiya.
4. Ku sii soco muuqaalka labaad Ku billow adiga oo si tartiib ah u dhigaya farta tusmada, dhexe iyo giraanta labada dhinac ee dhabannadeenna. Kadib si tartiib ah u dhoola caddee, si tartiib ah dhammaan saddexda farood ugu cadaadi dusha dhabanka, ku hay 5 ilbidhiqsi, ka dibna ku celi 10 jeer oo kale.
5. Aynu ku sii soconno booska saddexaad. Ku daboolo afka gacanta gacanta ku haysa Markaa dhabannada kor u qaad Kadib dabaysha afka ku wareeji dhabanka bidix. U dhaqaaq dhinaca dhabanka midig, adoo sameynaya 10 jeesto, oo nasanaya.
6. Booska ugu dambeeya ayaa ah in labada dhabanba laga nuugo afkaaga oo afkaaga lagu hayo 5 ilbidhiqsi. Samee 10 gadaal iyo gadaal boos kasta marka lagu daro fudeydka sameynta. Oo aan lahayn qalab adag Haddii si joogto ah loo sameeyo Sidoo kale waxay kaa caawineysaa yareynta dufanka wajiga Iska yaree wejiga dufanka leh, u beddelo murqo, qaab ugu dhigma hab fudud.
7. Cab biyo badan Ku filnaanshaha buuxinta baahiyaha jidhka, biyuhu waa daruuri si ay u lumiyaan miisaanka wejiga. Sababtoo ah waxay abuurtaa freshness Caawi habka dheef-shiidka Oo unugyada qayb kasta oo jidhka ka mid ah ha ahaadaan kuwo cusub oo si caadi ah u shaqeeya Dad badan ayaa si qaldan u fahmay taas Biyo badan cabid Waxay sababi kartaa barar wajiga iyo jirka Taas oo runti ah Cabidda 6 ilaa 8 koob oo biyo nadiif ah maalintii, gaar ahaan kahor cuntada gacanta. Kordhi koob biyo ah oo aad cabto Marka lagu daro kaa caawinta dhimista miisaanka Jidh cusboonaysiin Cun cunto ka yar Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa freshness-ka jirka sidoo kale
8. Iska yaree cabitaankaaga sharaabka iyo aalkolada. Khadadka xisbiyada waxay u baahan yihiin inay dib u abaabulaan noloshooda Marabtaa inaad yeelato waji qurux badan saami ahaan Sababtoo ah aalkoladu waxay fuuqbaxaysaa jirka Oo keenaya barar wejiga ah Illaa inta maqaarku dhalaalayo, wax yar cab, laakiin ku raaxayso jawiga. Caafimaadka wanaagsan waa qabow
9. Ka taxaddar cuntada oo naso. Iskusoo wada duuboo marka laga reebo qaababka miisaanka oo yaraada Doorashada cuntooyinka ay ku jirto fiberka Iyo borotiinka wanaagsan dhamaantiis waa muhiim. Ku dar fiitamiinada miraha caafimaadka qaba sida tufaaxa, guava ama liinta leh sonkorta yar. Waa muhiim inaad hesho nasasho kugu filan. Waxay u fiican tahay maqaarkaaga iyo caafimaadkaaga. Oo aad kula noolaato fahamka adduunka Had iyo jeer naftaada ugu dar tamar togan, taasi maahan wax adag, kaliya fiiro gaar ah u yeelo oo ka feker noloshaada. Isku day inaad keento qaabab fudud oo miisaankaaga oo yaraada oo aan kugula talineyno inaad aragto. Inaad yeelato waji dhalaalaya iyo midab